कु’टनीतिज्ञ लिएर नेपाल आयो अमेरिकी सेनाको जहाज ! – Nepal Online Khabar
चैत्र ४, २०७८ शुक्रबार 230
काठमाडौं : शुक्रबार बिहान अमेरिकी सेनाको जहाज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको छ । समाचार स्रोतका अनुसार युएस एयर फोर्सको जहाजले अमेरिकी कु’टनीतिज्ञ लिएर आएको हो।
यसअघि पनि पटक पटक कु’टनीतिज्ञ र अमेरिकी दूतावासका सामाग्री लिएर अमेरिकी जहाज काठमाडौंमा आउने गरेको थियो । तर, अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) संसदबाट १२ बुँदे व्याख्यात्मक घो’षणासहित पारित भएसँगै अमेरिकी सेनाको जहाज काठमाडौं आउनुलाई अर्थपूर्ण हेरिएको छ ।
सशस्त्र प्रहरीको टोलीले दुई करोड ८५ लाखको सामान बरामद …
पर्साबाट सशस्त्र प्रहरीको टोलीले विनाभन्सार नेपाल भित्र्याइएको रु दुई करोड ८५ लाख बराबरको सामान ब’रामद गरेको छ । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल नं १३ गणका अनुसार ब’रामद गरिएको सामग्रीमा कपडा, इलेक्ट्रोनिक सामान, हार्डवेयर, मोटर पार्टस, खाद्यपदार्थ र किराना पसलका सामान छन् ।
विभिन्न समयमा ब’रामद गरिएका ती सामग्री वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय र बारास्थित राजस्व अनुसन्धान कार्यालयको जिम्मा लगाइएको छ । गत माघमा रु ६२ लाख, फागुनमा रु एक करोड १४ लाख र चैतको हालसम्ममा रु एक करोड आठ लाखको सामान
ब’रामद गरिएको हो । ब’रामद गरिएका अधिकांश सामान अ’वैधरुपमा भन्सार छली नेपाल ल्याइएको रहेको सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल नं १३ गणले जनाएको छ । सशस्त्र प्रहरीले पछिल्लो पटक चोरी, नि’कासी तथा त’स्करी नियन्त्रणको अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
Prevप्रचण्डको गृहजिल्लामा रेखा थापा राप्रपाको चुनावी क-माण्डर !
Nextअन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छवि र विश्वसनीयतामा वृद्धि भएको छ :- प्रधानमन्त्री देउवा !